I-Samsung Galaxy S9 ngoku isemthethweni, zonke iinkcukacha kunye neempawu zeflegi entsha yeSamsung | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Izixhobo ze-Android, MWC, Samsung
Phantse unyaka wamarhe, ekugqibeleni sikwazile ukuphuma kumathandabuzo kwaye sajonga ukuba ngawaphi amarhe athe ekugqibeleni aqinisekiswa kwaye zeziphi ezizeziphumo zokufudumala kwengqondo kwabanye abantu abanomnqweno ogqithileyo wokuvelela. Bekusele nje imizuzu embalwa okoko iprizenteyishini iphelile kodwa Ngoku sinokuqinisekisa zonke iinkcukacha zeflegi entsha yeSamsung.
Enye yezinto ezinqabileyo ezitsala umdla omkhulu, siyifumana kwikhamera ye-S9, ikhamera ethi ngaphandle kokuba inelensi enye, isinike ngaphezu kweempawu ezimangalisayo, izinto ezisivumela ukuba sibambe amaxesha ngendlela elula kakhulu enkosi kukuvula okungafaniyo f / 1,5-f / 2.4, itekhnoloji endingayaziyo. Andibonanga kwesinye isiphelo sendlela.
1 Ikhamera ye-Samsung Galaxy S9
2 Ikhamera ye-Samsung Galaxy S9 +
3 Ngaphakathi kwi-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
4 Izikrini ze-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
5 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S9
6 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S9 +
7 Ukhuseleko kwi-Samsung Galaxy S9 kunye neGalaxy S9 +
8 Ixabiso le-Samsung Galaxy S9 kunye nomhla wokukhutshwa
9 Ixabiso le-Samsung Galaxy S9 + kunye nomhla wokukhutshwa
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S9
Ewe, ukuba asithatheli ingqalelo uhlobo lwegobolondo olusungulwe yinkampani yaseKorea kunyaka ophelileyo kwilizwe layo, isiphelo sendlela esinika inkqubo yokuvula eyahlukileyo esinokubamba kuyo nayiphi na imeko nakweyiphi na imeko, okoko nje sisazi eyona nzuzo, into umbulelo olula kakhulu kwimowudi ezenzekelayo.
Ubuncinane bokuvula, f / 1,5, busivumela ukuba sibambe ixesha elinokukhanya okuncinci kwaye enkosi kwinkqubo yokunciphisa ingxolo ngokuzenzekelayo ye-Samsung, iziphumo ezinikezelwa sisiphelo zinomtsalane, ngokungabikho kokuvavanywa ngokwasemzimbeni kwisiphelo sogqibo ukwenza uhlolo olupheleleyo kunye nokuqinisekisa amandla anikezelwa yile khamera intsha ivaliweyo.
Ikhamera yangaphambili ye-Galaxy S9 ifana ngokufanayo nesinokuyifumana ngaphambili, kodwa nge isivamvo esitsha ophucula kakhulu umgangatho wokubambiswa. Le khamera isinika isisombululo se-8 mpx, ukuvula kwe-f / 1,7 kunye ne-autofocus.
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S9 +
Umahluko ophambili esiwunikwa yiGPS S9 + ngokubhekisele kwinto eyandulelayo, siyifumana kwikhamera ephindwe kabini, ikhamera ephindiweyo esisinika iziphumo ezifanayo nezo sinokuzifumana ngoku kwiGalaxy Note 8, indawo yokuqala inkampani enegumbi eliphindwe kabini. Njenge-Galaxy S9, ngasemva sifumana iilensi eziyi-12 mpx ezinendawo evulekileyo ukusuka ku-f / 1,5 ukuya ku-f / 2.4 kunye neelensi ezibanzi ezikumgangatho ongafakwanga f / 2,4.
Ngokumalunga nekhamera yangaphambili, kwakhona amaKorea aseSamsung akhethe ukumilisela Ikhamera yangaphambili ye-8 mpx ene-f / 1,7 ukuvula nge-autofocus, nangona ngokungafaniyo nenye esinokuyifumana kwi-Galaxy S8 kunye ne-S8 + inzwa iphuculwe.
Ngaphakathi kwi-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Enye into entsha enikezelwa sisizukulwana sesithoba seGlass S9, siyifumana kwisixa se-RAM esifumaneka kuzo zombini iimodeli. Kakhulu i-Galaxy S9 njengeGPS S9 isinika i-6 GB ye-RAM, ngaphezulu kwenani elaneleyo le-RAM ukuze ukuvulwa kwezicelo kwimemori kukhawuleze kakhulu ukongeza ekunikezeleni ngobushushu obukhulu kwinkqubo yonke.
Ngokuphathelele kwiprosesa, asifumani zindaba, kuba le modeli intsha iya kufumaneka kwiinguqulelo ezimbini, ejolise kwiimarike ezahlukeneyo. Kwelinye icala sifumana iQualcomm Snapdragon 845 ye-United States, Latin America ne China, ngelixa I-Exynos 9810 iya kuba yiprosesa eya kuthi ilawule yonke i-Galaxy S9 kunye neGalaxy S9 + ezafika zombini eYurophu njengamanye amazwe.
Izikrini ze-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 +
Isamsung ilandela umkhondo ukusukela kunyaka ophelileyo, yamkela isikrini se-5,8-intshi yeGPS S9 kunye nescreen se-intshi ye-6,2 ye-Galaxy S9 +. Kwakhona iyaqhubeka ukubheja kwiscreen esingenasiphelo, igama eliqulunqwe yinkampani ngokusungulwa kweGPS S8 kunye ne-S8 +. Zombini iiterminal zisinika i-18.5: 9 ratio ratio, ngaphandle kokubheja nangaliphi na ixesha kwinotshi eyenze ukuba i-iPhone X ibe yefashoni, Kwaye abavelisi abaninzi baqalisile ukwamkela.
Kwakhona i-Galaxy S9 kunye ne-S9 + zisebenzisa uhlobo lwe-SuperAMOLED yescreen esinefayile ye- isisombululo kuzo zombini izixhobo ezingama-2.960 x 1.440 pixels, ngomlinganiso ofanayo wescreen osetyenzisiweyo kuzo zonke iiterminal eziye zafikelela kwimarike kunyaka ophelileyo ukusukela oko iSamsung izakubonisa i-S8 kunye ne-S8 +.
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S9
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung Galaxy S9
Umzekelo Galaxy S9
Inkqubo yokusebenza Android Oreo 8.0
Isikrini 5.8 intshi - 2.960 x 1.440 dpi
Inkqubo I-Exynos 9810 / i-Snapdragon 845
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64. 128 kunye ne-256 GB iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera esemva I-12 mpx yokuvula okungafaniyo f / 1.5 ukuya f / 2.4. Ividiyo ehamba kancinci ye-960 fps
Ikhamera yangaphambili 8 mpx f / 1.7 nge-autofocus
Ezinye izinto Inzwa yeminwe yeminwe-Ukuvula ubuso-Iskena se-Iris
Ubukhulu X x 147.7 68.7 8.5 mm
U bunzima I-1634 gram
Ixabiso 849 euro
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S9 +
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung Galaxy S9 +
Umzekelo Galaxy S9 +
Inkqubo yokusebenza Android 8.0
Isikrini 6.2 intshi - 2.960 x 1.440 dpi
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64 128 kunye ne-256 GB iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera esemva Iikhamera ezi-2 ze-12 mpx. inye enokuvula okungafaniyo f / 1.5 - f / 2.4 kunye nekota yesibini ebanzi f / 2.4. Ukuhamba kancinci kwe-960 fps
Ibhetri 3.500 mah
Ubukhulu X x 158 73.8 8.5 mm
Ukhuseleko kwi-Samsung Galaxy S9 kunye neGalaxy S9 +
Njengamanqwanqwa amaninzi afikelele kwintengiso kwiinyanga ezidlulileyo, ngakumbi emva kokuboniswa kwe-iPhone X, i-Galaxy S9 entsha kunye ne-S9 + ikwasinika Inkqubo yokwamkelwa kobuso, Ukongeza kwisenzisi seminwe yeminwe kunye nesifundo se-iris. Kucacile ukuba i-Samsung ijolise ekunikezeleni ngenkqubo yokhuseleko eyenza ukuba i-terminal isebenze ngokungakhathali.
Ixabiso le-Samsung Galaxy S9 kunye nomhla wokukhutshwa
Kukho amarhe amaninzi kwiinyanga nje ezidlulileyo, apho kwathiwa iiflegi ezintsha zeSamsung zingadlula kwi-1000 euro, kwimodeli enobungakanani obuncinci. Njengoko besikuxelele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, Ixabiso le-Samsung Galaxy S9 liqala kuma-euro angama-849.
Lo mzekelo ungabhuka ngoku Ukusukela nge-8 ka-Matshi, abasebenzisi abayigcinayo baya kuqala ukuyifumana, kodwa ayizukuba kude kube ngumhla we-16 kuMatshi, xa esi sikhundla sifikelela ngokusemthethweni kwintengiso.
Ixabiso le-Samsung Galaxy S9 + kunye nomhla wokukhutshwa
Kunyaka ophelileyo, umahluko phakathi kweGPS S8 kunye ne-S8 + yayiyi-100 euro. Kulo nyaka, umahluko uhlala ufana, ke I-Galaxy S9 + iya kufika kwimarike ye-949 euro, 100 euro ngaphezu komninawa wakhe omncinci.
Njengomntakwabo omncinci, le modeli Ngoku ungabhukisha ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni yeSamsung, kodwa ayizukuba kude kube ngoMatshi 8 ozayo xa abasebenzisi bokuqala abenza ukubhukisha beqala ukuyifumana. Ukuba awunamdla wokuyigcina, kuya kufuneka ulinde de kube ngu-Matshi 16, umhla okhethwe yi-Samsung yokwazisa ngeemarike zesiphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Samsung Galaxy S9 ngoku isemthethweni, zonke iinkcukacha kunye neempawu zeflegi entsha yeSamsung